Fomba stratejika 4 hanatsarana ny atiny misy anao amin'ny 2020 | Martech Zone
Alatsinainy 24 Febroary 2020 Alatsinainy 24 Febroary 2020 Shane Barker
2018 nahita momba 80% ho an'ny mpivarotra mampiasa votoaty hita maso ao amin'ny paikadin'ny media sosialy. Toy izany koa, ny fampiasana horonan-tsary dia nitombo efa ho 57% teo anelanelan'ny 2017 sy 2018.
Efa niditra tamin'ny vanim-potoana iray izay ilain'ny mpampiasa atiny manintona isika izao, ary tadiavin'izy ireo haingana. Ho fanampin'ny fanatanterahana izany dia izao no antony tokony hanaovanao izany mampiasa atiny hita maso:
Easy to anjara
Tsotra ny tsarovy
Mahafinaritra sy mahasarika
Mazava araka izany fa mila manatsara ny lalao varotra maso ianao. Mba hanampiana anao hivoaka, dia nanangona paikady vitsivitsy azonao ampiharina hanatsarana ny atiny maso amin'ny taona 2020 aho.
Paikady # 1: Ampiasao ny herin'ny infografika
Infografika dia sary izay misy fampahalalana mahasoa be dia be. Manampy anao izy ireo hanolotra ny mombamomba anao amin'ny fomba manintona sy mahasarika ho an'ny mpihaino anao.
Izy ireo dia modely tsara hanaterana vaovao amin'ny endrika mirindra kokoa miaraka amin'ireo singa hita maso. Rehefa dinihina tokoa, raha omena safidy ianao, afaka mamaky teny an-tsoratra 1000 ve ianao, na mamaky tabilao fintina izay mampiseho fampahalalana mitovy?
Ny ankamaroan'ny olona dia hisafidy ity farany.
Araka ny vaovao farany fitsapan-kevitra, 61% amin'ireo mpanjifa no nilaza fa ny infografika no endrika atiny mahomby indrindra amin'ny fitazonana ny fampahalalana sy ny fianarana.
Ireo sary sy sary mavitrika ampiasaina amin'ny infografika dia mandeha lavitra amin'ny fihazonana ny mpamaky ho liana.
Mazava ho azy fa ny infografika dia endrika matanjaka amin'ny atiny hita maso.
Saingy, ahoana no hampiavaka anao ny tenanao eo afovoan'ny olona an-tapitrisany tototry ny Internet?
Ireto misy torohevitra vitsivitsy izay afaka manampy:
Tery ny lohahevitra iray
Hamarino tsara fa mifantoka ianao. Ny infographic izay misy antsipiriany be loatra dia mety hampisafotofoto ny mpamaky.
Ny infografikao dia mety ho lasa tsara lavitra raha tsy ampidirinao ao daholo ny angona azonao. Kosa, ajanony ho lohahevitra tokana ny fifantohanao ary alao antoka fa mamorona sary momba izany ianao.
Ity misy ohatra iray amin'ny infographic mazava sy fohy:
Raiso tsara ny refy
Ny infografika dia heverina ho lehibe kokoa noho ny sary sy ny kisary mahazatra. Nefa alao antoka fa marina izy ireo ny habe azo tantanana sy ny halavany. Raha tsy tadidy ao an-tsaina izany dia mety tsy hahita mpamaky mety ho izy.
Mamorona sary tsy misy clutter
Tsy te-hanolotra infographic izay be loatra loatra ianao. Ampio foana ny habaka izay hanampy ny mpamaky hitety ny fampahalalana amin'ny fomba milamina.
Ho fanampin'izay, alao antoka fa na ny haben'ny endri-tsoratra kely indrindra ao amin'ny infographic aza dia mora vakiana.
Vantany vao vita ny famoronana infographic lehibe dia azonao atao ny mandefa izany amin'ny tranokala isan-karazany ao amin'ny akany. Ity dia afaka manampy anao hanatratra mpihaino marobe.
Paikady # 2: Alefaso ny atiny natao manokana
Ny mpanjifa dia maniry ny atiny mifantoka manokana amin'ny tombontsoany. Raha ny tena izy, 91% ny mpanjifa dia azo inoana fa hiantsena amin'ny marika izay manaiky sy manome azy ireo tolotra namboarina sy tolo-kevitra namboarina.
hafa Fanadihadiana 2018 dia nanambara fa raha tsy atokana ho azy ny atiny, dia sosotra ny 42% -n'ny mpanjifa, ary ny 29% amin'izy ireo dia tsy dia afaka mividy.
Sary avy amin'ny SlideShare
Ny fomba iray hahitana izay tadiavin'ny mpihaino anao dia amin'ny alàlan'ny fihainoana ara-tsosialy. Misy fitaovana maro any ivelany izay afaka manampy anao hanao izany. Hanampy anao hanombatombana ny fihetseham-pon'ny mpampiasa anao izy ireo ary hahalala izay hevitr'izy ireo momba anao sy ireo mpifaninana aminao.
Andeha hojerentsika izao ny fomba samihafa ahafahanao mampiavaka ny atiny.
Visual Visual Behind-the-Scene
Ny fitadiavana izay miditra amin'ny famoronana vokatra dia miteraka fahatsapana fifandraisana akaiky ao an-tsain'ny mpihaino anao. Amin'ny alàlan'ny fandefasana atiny aorinan'ny seho toy ny sary sy horonantsary amin'ny sehatra media sosialy, azonao atao ny manome ny masonao mpijery ny asanao.
Anna, mpaka sary monina any Toronto, dia manao izany amin'ny alàlan'ny sasany amin'ireo lahatsorany Instagram.
sary avy amin'ny Instagram
Ho fanampin'izany, ny fiasa toa ny Instagram sy ny Facebook dia afaka manaporofo fa manampy amin'io lafiny io.
Mamorona atiny voapetraka
Ny famoahana votoaty hita maso dia tsy mifarana amin'ny fampiasana ilay fiteny miteny eo an-toerana. Ny fampiasana ny famantarana sy ny fambara eto an-toerana amin'ny atiny dia afaka manampy ny mpampiasa hifandray eo noho eo.
Ny paikadim-pitondrana eo an-toerana an'i McDonald dia fantatra erak'izao tontolo izao. Tsy vitan'ny fanovana ny menus fotsiny no anaovan'izy ireo izany, fa amin'ny alàlan'ny atiny hita maso ihany koa.
Ohatra, ny McDonald's dia mitaona ny mpanjifa any Etazonia handany ny sakafony amin'ny fizarana atiny misy ifandraisany amin'ny toerana misy azy. Vao tsy ela akory izay no nizara lahatsoratra tamin'ny Fetin'ny Cheeseburger Nasionaly hisarihana ny mpihaino azy ireo avy any Etazonia izy ireo.
Ohatra iray hafa dia ny fampielezan-kevitra nataon'i McDonald's nandritra ny taom-baovao sinoa tamin'ny taona 2016. Satria ity dia fotoana iray izay an-dàlana maro hizaha ny fianakaviany, ny fampielezan-kevitra dia nifantoka tamin'ny lanjan'ny fiarahana sy ny fotoam-pianakaviana.
Tamin'ny alàlan'ny horonan-tsary sy sary dia naneho ny kinova kely kely an'i Ronald McDonald nanao dia lavitra nody.
sary avy amin'ny Manangana Digital
Raha fintinina, amin'ny alàlan'ny personalization, ny votoaty hita maso dia mety hiteraka fihetseham-po mahery, ary hampiditra ny mpampiasa.
Paikady # 3 Atsofohy ao anaty ny atiny misy anao ny hatsikana
Ny fampidirana vazivazy ao anaty atiny misy anao dia mety hisy fiatraikany lehibe amin'ny fomba fifandraisan'ny mpihaino anao amin'ny orinasanao.
Ny iray amin'ireo fomba tsara indrindra hanatanterahana izany dia amin'ny alàlan'ny memes. Fohy izy ireo, mora azo, ary mahatsikaiky koa. Raha tsy izany, afaka mampiasa GIF sy sarisary mahatsikaiky na sary an-tsary ianao hampidirana ny mpihaino anao.
Ny fahitana mampihomehy dia tsy vitan'ny hoe mampiditra ny mpihaino anao fotsiny fa afaka manome fiatoana tena ilaina amin'ny lahatsoratra.
Ny fampidirana atiny mampihomehy ao anaty ny masonao dia tsy manome ny maha-fantatra anao fotsiny ny marikao, fa mampihena koa ny tahan'ny fiakarana.
Ohatra, ny The Royal Ontario Museum dia matetika mampiasa meme hampidirana ny mpihaino azy amin'ny Instagram. Mariho ny fomba nampiasan'izy ireo ny farany Fanamby Dolly Parton ao amin'ny kaontiny Instagram.
sary avy amin'ny resygram
Ankoatr'izay, ny hatsikana dia tsy voatery ho mampihomehy. Mety sarin'ny alika na horonan-tsary zazakely - izay rehetra mitsiky ny mpihaino anao.
Na angamba, ny atiny mety ho SADY mahatsikaiky sy mahafatifaty. BarkBox, serivisy famandrihana ho an'ny vokatra alika, dia manome ohatra tsara. Mampiseho sary alika mahafatifaty io ary manampy vazivazy amin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fampidirana teny mampihomehy.
Na izany aza, alohan'ny hanekena ny vazivazy, hamafiso raha mifanaraka amin'ny tonony sy ny feon'ny marikao izany. Ho fanampin'izay, alao antoka fa tsy mampiasa vazivazy mahatsikaiky ianao, mahasosotra, na tsy mendrika. Mety tsy hamokatra amin'ny marikao izany.
Paikady # 4: Mampiasà ireo fitaovana atiny hita maso tsara
Ny fironana miovaova tsy tapaka sy ny tombontsoan'ny mpampiasa dia mety hanasarotra ny ace amin'ny paikadin'ny votoatinao. Izany no antony tokony handinihanao ny fampiasana fitaovana izay afaka manampy anao mamorona sary an-tsehatra sy manamafy ny fahitana azy ireo amin'ny media sosialy.
Ampiasao ny fitaovana toa an'i Canva, Animaker, Google Charts, iMeme, ary bebe kokoa mba hamoahana sary mahafinaritra.
Raha mampiasa ny herin'ny votoaty hita maso tsara ianao dia afaka manampy anao hiteraka fifamatorana goavana. Tokony handinika manokana ny votoatin'ny masonao ianao mba hahamety kokoa ny mpihaino anao.
Ho fanampin'izay, tokony hampidirinao ao anaty paikadin'ny votoatinao ny infografika, raha mbola tsy nanao izany ianao. Izy io koa dia manampy amin'ny fampidirana hatsikana vitsivitsy hanintona kokoa ny atiny.
Farany, ampiasao fitaovana famoronana votoaty hita maso hanatsarana ny lalaoo sy hanararaotana bebe kokoa ny atiny maso.
Misy paikady hafa ampiasainao hanatsarana ny atiny fijerinao? Ampahafantaro anay ireo hevitra.
Tags: statistikan'ny atin'ny adobeahoana nomanatsara ny atiny sosialyatiny voafaritraMarketing Infographicsmemeatiny manokanastatistika momba ny atiny hita maso
Shane Barker dia consultant marketing nomerika mandritra ny 15 taona miaraka amin'ny fanamafisana ny Influencer Marketing tao anatin'ny 5 taona lasa. Manam-pahaizana manokana amin'ny fantsom-pivarotana, ny fifamoivoizana kendrena ary ny fivadihan'ny tranonkala izy. Nifampidinika tamin'ny orinasa Fortune 500 izy, Influencers misy vokatra nomerika, ary olo-malaza A-List maromaro.